यस्तै छ साथी, न्युयोर्कको हाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १९, २०७६ मच्छेदेवी गुरुङ
संक्रमित भए वा नभएको पुष्टि नभएसम्म बुझ्ने काम जारी रह्यो । अमेरिकामा कोरोनाको इपिसेन्टर न्युयोर्कलाई मानिएको छ । न्युयोर्कमा पनि सबैभन्दा बढी संक्रमित क्विन्समा छन् । त्यसैले पनि क्विन्स इपिसेन्टरको पनि इपिसेन्टर घोषणा गरिएको छ । कोरोना संक्रमित नेपाली मेरै साथी भन्ने थाहा पाएपछि मलाई झनै पीडा भयो । साथीका छोराहरू सानै छन् ।
केही दिनअघि मात्रै अनिल सुब्बाको उपचारकै क्रममा अस्पतालमा निधन भयो । सुब्बाको शव अस्पतालमा नै राखियो । उनका २ छोरा, १ छोरी र श्रीमती घरैमै क्वारेन्टाइनमा थिए । सुब्बाको मृत्युले परिवारलाई निकै क्षति पुग्यो । कोरोना भाइरस अरूलाई पनि सर्न सक्छ भन्ने त्रासले सुब्बाको अन्तिम बिदाइमा श्रीमती र सन्तानसमेत जान पाएनन् ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अस्पतालले नै अन्तिम संस्कार गर्‍यो । श्रीमान् र बुबालाई गुमाउनुको पीडा एकातिर छ, अर्कोतिर शवसमेत देख्न र छुन नपाउनु अनि अन्तिम बिदाइ पनि गर्न नपाउनु कतिसम्मको दुर्भाग्य होला ? कल्पनै गर्न सकिँदैन । यति मात्र होइन, यो परिवारलाई भाइरससँग लडेर आफू बच्नुपर्ने पहाडजस्तो अग्लो, चुनौती पनि आइपरेको छ । मृत्यु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, कोरानाले मृत्युलाई पीडादायी, भयानक र एक्लो बनाइदियो । यतिसम्म कि सुब्बाले मलामीसमेत पाएनन् ।
न्युयोर्कका कवि मणि बाङ्देलले फेसबुकमा पछिल्लो १२ दिनभित्र उनको घरबेटीले भोगेको घटना लेखे । बाङ्देलको घरबेटीले केही दिनअघि औषधि ल्याइदिन अनुरोध गरेका रहेछन् । अनुरोध मान्दै उनले १६ बोतल इन्सुर नामक प्रोटिन किनेर लगिदिए । औषधि ल्याइदिएको ३ दिनपछि घरबेटी बुबालाई एम्बुलेन्समा अस्पताल लगियो । त्यसपछि घरबेटी आमा बिरामी भइन् । बाङ्देलले नै अस्पताल पुर्‍याइदिए ।
अहिले बाङ्देलको घरबेटी बुबाको मृत्यु भइसक्यो । घरबेटी आमाको उपचार भइरहेको छ । न्युयोर्क राज्य कोरोनाले बन्द छ । घरबेटी बुबाको लास अरूलाई नै जलाउन भनिएको छ । केही दिनअघिसम्म सँगै बाँचेका बूढाबूढी मर्ने बेला एक जना एकातिर, अर्को अर्कातिर भएर एकअर्कालाई नदेखी छुट्टिए । यो कस्तो नियति र मृत्यु ! बिहेमा जन्ती र मर्दामा मलामी कमाउनुपर्छ भन्ने नेपाली उखान लागू गर्न निर्दयी कोरोनाले दिएन । कोरोना आफन्त र मृतकबीच पर्खाल बनेर उभिएको छ । कोरानाले एकै परिवारका सदस्यबीच पनि दूरी बनाइदिएको छ । साथीभाइलाई चाहेर पनि भेट्न सक्ने स्थिति छैन । भेट्न, स्पर्श गर्न र माया देखाउन कोरोनाले निषेध गरेको छ ।
नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका आप्रवासीको बाक्लो बस्ती रहेको न्युयोर्कको क्विन्स अवस्थित ज्याक्सन हाइट्स अहिले सुनसान छ । कोरोना संक्रमितको संख्या दिन दुगुना रात चौगुना बढेपछि न्युयोर्कमा संकटकाल घोषणा गरियो ।
संकटकाल घोषणापछि अस्पताल, बैंक, प्रहरी, सुरक्षा, यातायात, बिजुलीलगायतका अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै बन्द छन् । रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र अन्य व्यापारिक केन्द्रहरू पनि बन्द छन् । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय बन्द भएपछि अधिकांश विद्यार्थीले घरबाटै अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन् । बस तथा ट्रेन सेवा सञ्चालनमा आए पनि एकदमै कम यात्रु देखिन्छन् । ग्रोसरी स्टोरमा अधिकांश ग्राहकले पञ्जा र मास्क लगाएको देखिन्छ ।
बानेश्वर, पुलतीसडक जत्तिकै व्यस्त हुने ज्याक्सन हाइट्समा पहेंलो र हरियो ट्याक्सी अनि उबर मुस्किलले देख्न सकिन्छ । तर, उबरमा काम गर्ने प्रायः सधैं व्यस्त हुन्छन् । र, व्यस्त हुनेमा अधिकांश आप्रवासी हुन्छन् । औषधि पसलमा मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजरलगायत सामान छैनन् ।
हेन्ड वास, ट्वाइलेट पेपर र पेपर टाबेलसमेत बजारमा सजिलै पाइँदैन । संक्रमतिको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ । ठाउँ नपुगेर बिरामीलाई टेन्ट टाँगेर पनि राखिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक पर्ने पीपीई, एन–९५ मास्क मात्र होइन, उपचार उपकरणको पनि अभाव रहेको समाचार आएका छन् । ज्याक्सन हाइट्समा अवस्थित अस्पतालको आकस्मिक सेवामा कार्यरत चिकित्सक कोलिन स्मिथले विश्वकै शक्तिशाली मुलुकमा पनि बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक सामग्री अभाव भएको र सरकारले सहयोग नगरेको न्युयोर्क टाइम्सलाई बताएकी थिइन् ।
अमेरिकी सरकारले सबै ठीक हुन्छ भने पनि समयमै आवश्यक उपकरण उपलब्ध नगराउँदा बिरामीको अवस्था झनै कठिन र खराब बन्दै गएको छ । त्यस्तै मृत्यु संख्या पनि बढिरहेको छ । दैनिक २ सय बिरामी उपचार गर्ने आकस्मिक कक्षमा अहिले ४ सय बिरामी आउने गरेका छन् । अस्पतालमा भेन्टिलेटर अभाव छ । कोरोना परीक्षणको लागि आउने बिरामीको लाइन पनि अस्पताल परिसर बाहिर पुगेको छ ।
कोरोनाले मानिसको दैनिकी यस्तो डरलाग्दो बनाइदिएको छ । साथी भेट्दासमेत मुख फर्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । र, नाता–सम्बन्ध अनि मानवताको परिभाषालाई सीमित दायराभित्र खुम्च्याइदिएको छ । आफन्त संक्रमित भए रेखदेख गर्न र भेट्नसमेत सकिँदैन ।
अहिले विश्वमै न्युयोर्कलाई कोरोनाको केन्द्र मानिँदै छ । र, न्युयोर्क चरम संकटमा छ । यो आलेख लेखिरहँदा अमेरिकामा १ लाख ८८ हजार ५ सय संक्रमित छन् । न्युयोर्कमा ७५ हजार ७ सय ९५ छन् । १३ हजारभन्दा बढी क्विन्समा देखिएको छ । जसले गर्दा क्विन्सलाई एकदमै संवेदनशील स्थान मानिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि अमेरिकी सरकारले पहल गरिरहेको राष्ट्रपति, राज्यका गभर्नर, मेयरलगायतले बताए पनि संक्रमितको संख्या दिनदिनै हजारौंको संख्यामा बढिरहेको छ ।
विश्वमा शक्तिशाली मानिएको राष्ट्र अमेरिकामा आवश्यक उपचार हुन नसक्दा बिरामीको मात्र होइन, उपचारमा संलग्न नर्सको समेत ज्यान गयो । सरकारको कमजोर व्यवस्थापनको मूल्य कोरोना संक्रमित र उपचारमा दिनरात खटिने नर्सले चुकाउनुपर्‍यो । अमेरिकाको वर्तमान अवस्था मध्यनजर गरी हाम्रोजस्तो मुलुकले बेलैमा पूर्वतयारी अपनाएर नागरिकको ज्यान जोगाउनुपर्छ । प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १८:५७
उच्च रक्तचापले ब्रेन ह्यामरेज भएकी एक बिरामीलाई चारवटा अस्पतालले ज्वरो नाप्दै कोरोनाको आशंकामा रेफर गरे, अन्त्यमा नोबेल अस्पताल पुर्‍याउँदा चिकित्सकले भने, ‘ढिलो भयो, बचाउन सकिएन ।’
चैत्र १९, २०७६ देवनारायण साह
मोरङ — कोरोनाको आशंकामा अस्पतालले रेफर गर्दागर्दै धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । महालक्ष्मी ५ की ५२ वर्षीया नरदेवी गुरुङको मंगलबार मृत्यु भएको हो ।
मंगलबार बिहान रक्तचाप बढेपछि सुरुमा स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचारका लागि लगिएको उनकी छोरी लक्ष्मी गुरुङले बताइन् । ‘स्वास्थ्य चौकीमा उपचारसम्भव नभएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्यायौं,’ उनले भनिन्, ‘तत्काल आईसीयूमा राख्नुपर्छ तर यहाँ आईसीयू खाली छैन भन्दै चिकित्सकले न्यूरो अस्पताल विराटनगरमा रेफर गरिदिनुभयो ।’
उनका अनुसार त्यहाँबाट एम्बुलेन्समा न्यूरो अस्पताल ल्याएर भर्ना गरिए पनि चिकित्सकले ज्वरोलगायतका जाँच गरेपछि आईसीयू खाली नभएको भन्दै विराट नर्सिङ्ग होम लैजान सुझाएका थिए ।
‘विराटले पनि उपचारको सबै तयारी गर्‍यो तर ज्वरो नापेपछि नोबेल अस्पतालमा रेफर गरिदियो,’ उनले भनिन्, ‘नोबेलमा ल्याएपछि उपचार सुरु गरिए पनि ढिलो भइसकेकाले बचाउन सकेनौं भन्दै चिकित्सकले केही बेरमै मृत घोषणा गर्नुभयो ।’
नोबेल अस्पताल प्रशासनका नारायण दाहालले नरदेवीलाई अस्पतालमा ल्याएपछि चिकित्सकले टाउकोको सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा अत्यधिक रक्तश्राव भएको र रगत जमेको पाइएको बताए ।
चिकित्सकले उपचार प्रयास गरेको तर निकै ढिला भएकाले बचाउन नसकेको उनले जानकारी दिए । दाहालले भने, ‘बिहानै उच्च रक्तचापले ब्रेन ह्याम्रेज भएको र चारवटा अस्पताल डुलाउँदा समय खेर गएकाले बचाउन सकिएन ।’ समयमै उपचार गरेको भए नरदेवीको ज्यान जोगिन सक्ने उनले बताए ।
न्यूरो र विराट नर्सिङ होमले कोरोना संक्रमण भएको आशंकामा उपचार नगरिदिँदा आमाको मृत्यु भएको लक्ष्मीले गुनासो पोखिन् । ‘उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दुवै अस्पतालले आमाको ज्वरो नाप्दा १०२ डिग्रीभन्दा बढी देखिएपछि कोरोना संक्रमणको आशंकामा उपचार गरेनन् ।’
न्यूरो अस्पताल विराटनगरका निर्देशक राजेश भट्टराईले अस्पतालमा आईसीयू खाली नभएकाले नरदेवीलाई चिकित्सकले रेफर गरेको दाबी गरे । विराट नर्सिङ्ग होमका प्रशासन प्रमुख पदम विनाडीले नरदेवीलाई ज्वरो आएकाले चिकित्सकले कोरोनाको आशंकामा रेफर गरेको हुनसक्ने बताए ।
‘अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको उपचारमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीका लागि कुनै सुरक्षात्मक सामग्री नभएकाले हामीले रेफर गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १८:५५